Hamiga: Gammaanta Si Aad u Maamusho, U Dhiirrigeliso, oo aad u Badiso Waxqabadka Kooxdaada Iibinta | Martech Zone
Waxqabadka iibku wuxuu muhiim u yahay ganacsi kasta oo koraya. Iyada oo ay ku jiraan koox iib ah, waxay dareemayaan dhiirigelin dheeri ah oo ku xiran yoolalka iyo ujeeddooyinka ururka. Saameynta taban ee shaqaalihii shaqada laga eryay ee ururku waxay noqon kartaa mid la taaban karo - sida wax soo saar la'aanta, iyo tabar darida iyo ilaha dhaqaalaha.
Marka ay timaado kooxda iibka si gaar ah, kaqeybgal la'aan ayaa ku waayi karta ganacsiyada dakhli toos ah. Ganacsiyadu waa inay raadiyaan qaabab ay si firfircoon ugala qaybqaataan kooxaha iibka, ama ay u halistaan ​​inay dhisaan koox aan waxqabad lihi soo saarin oo leh waxsoosaar hooseeya iyo heerka wareegga oo sarreeya.
Ujeeddada Maareynta Iibka hamiga
Hanka waa madal maareyn iib ah oo isku dhafan waax kasta oo iib ah, ilaha xogta, iyo waxqabadka halbeegga si wada jir ah hal nidaam fudud. Hamigu wuxuu bixiyaa caddayn wuxuuna muujiyaa falanqaynta waxqabadka waqtiga-dhabta ah ee dhammaan ururada iibka.
Iyadoo la adeegsanayo isudhafid-iyo-dhibic fudud, xitaa hoggaamiyeyaasha iibka aan farsamada ahayn waxay abuuri karaan kaararka caadiga ah, tartamada, warbixinnada, iyo inbadan. Waa kuwan dhowr dariiqo oo kale oo hoggaamiyeyaasha iibku ay ugu adeegsadaan hamiga tiknoolajiyadooda.
Qaado Peloton una beddel barnaamij loogu talagalay kooxaha iibka waxaadna leedahay hammi –ku-tababbar dhiirigelin ah oo lagu daray hoggaamiye kooxeed. Iyada oo leh Peloton, wadayaashu way arki karaan halka ay istaagaan inta lagu jiro safarka iyada oo la kordhinayo wax soo saarkooda. Iyada oo loo marayo barnaamijka gammada ee barnaamijka 'ambition', hogaamiyaasha iibka waxay abuuri karaan khibrad la mid ah tartamada khiyaaliga ah, TV-yada iibka, hoggaamiyeyaasha iyo SPIFFs si ay uga caawiyaan isbadal macno leh oo ka dhex dhaca ururka.
Gamification wuxuu jiray tobaneeyo sano, qaab ama qaab kale. Kooxaha iibku waxay heleen qiimo ay ku abuuraan dhiirigelin iyo dhiirigelin tartan si loo abuuro kaqeybgal sare iyo heerar dhiirigelin ah oo ka mid ah kuwa soo noqnoqda. Ka dib oo dhan, yaa aan jeclayn wax yar oo tartan ah?
Waxaa ku dhiirrigaliyay wareejinta degdegga ah ee shaqada fog, gamification-ka wuxuu isu beddelay "fiican-in la haysto" oo loo beddelay "baahi loo qabo". La xisaabtanka kooxaha ayaa noqday mid aad muhiim u ah maadaama kooxaha iibku aysan ku sii jirin dabaqa iibka. Gamification wuxuu sidoo kale siin karaa hoggaamiyeyaasha iibka aragti ku saabsan sida dib-u-eegistooda ay u shaqeeyaan inta ay ka shaqeynayaan guriga waxayna u oggolaaneysaa iyaga inay dhiirrigeliyaan tartan caafimaad leh.
Iibka Software Koorsooyinka
Tababbarka iibintu waa tilmaamaha ugu saameynta badan ee leverku leeyahay oo ah in la kordhiyo waxqabadka iibiyaha wax soo saarkiisa, isla markaana, ay saameyn togan ku yeeshaan kooxda iibka guud ahaan. Waxba ma ahan warshadaha, wareejinta waa dhibaato caan ku ah iibka, iyo fursadaha horumarinta xirfadeed ayaa door ka ciyaari kara dhiirigelinta shaqaalaha ee joogitaanka.
Iyadoo kooxuhu aysan sii jirin dabaqa, Hogaamiyaasha iibka awood uma lahan inay ku istaagaan miiska wakiilka oo ay weydiiyaan sida ay yihiin, arag halka ay caawimaad uga baahan yihiin ama ka jawaabayaan su'aalaha raagaya. Si kastaba ha noqotee, Ambition, tababarka iibka ayaa u fududeynaya maamulayaasha iibka maaddaama ay sii wadaan la qabsiga jawigooda fog. Shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryarba, hogaamiyaasha iibka waxay dejin karaan shirar soo noqnoqda, duubtaan wada sheekeysiga, iyo keydinta qorshooyinka waxqabadka hal meel oo dhan. Dabacsanaanta iyo barnaamijka adag wuxuu u oggolaanayaa hoggaamiyeyaasha inay qorsheeyaan barnaamijyadooda isla markaana otomatigga shirarka soo noqnoqda sidaa darteed, markii noloshu jidka ku soo xumaato, shirarka ayaa horay loo dejiyay.
Fahanka Iibka iyo Maareynta Waxqabadka
Kooxda iibintu waa mishiinka awood siiya ganacsi kasta. Nidaamka maaraynta waxqabadka iibka ee shirkaddu waa inuu diiradda saaraa sidii mashiinkan looga dhigi lahaa mid si fiican loo adeegsaday, tababarro ku saabsan xirfadaha ay u baahan yihiin si loo gaaro yoolalka abaabul iyo la socoshada horumarkooda markay u socdaan.
Iyada oo xogta CRM awood siinta dhibcaha wax soosaarka iyo tartamada, hoggaamiyeyaasha iibka waxay hubin karaan in dib u soocelintooda ay galayaan dhammaan waxqabadyadooda, ujeeddooyinka, iyo qoraalada macaamiisha hadda iyo kuwa mustaqbalka. Hogaamiyaasha iibka sidoo kale waxay u muuqdaan aragti wicitaanada ama emayllada la dhammeeyay, iyo kulamada jadwalka ah ama la dhammeeyay, waxayna u eegaan dib u eegisyada wax soosaarka afar geesoodka si loo arko cidda howlaha u beddeleysa ujeeddooyinka iyo natiijooyinka.
Maamulayaasha iibka ee raadinaya inay ka fahmaan waxqabadka iibkooda waxqabadka maalinlaha ah, barnaamijka 'Ambition' wuxuu siiyaa wakiil kasta oo iibin leh kaararka dhibcaha oo ay ku jiraan bartilmaameedyada maalinlaha ah. Hogaamiyeyaasha iibintu way arki karaan in wakiilka u hadhay maalinta iyada oo aan la dhammaystirin waxqabadka 100% waxayna u oggolaaneysaa iyaga inay jadwal u yeeshaan kulan tababar deg deg ah si ay uga caawiyaan reps inay ku soo noqdaan wadada saxda ah. Iyadoo aysan jirin xaq u hab lagu kormeero sida ay iibiyayaashu u fulinayaan, iyadoo la adeegsanayo nidaamka maaraynta waxqabadka iibka, sida hamiga, waxay hubin kartaa helitaanka xog lagu kalsoonaan karo waxayna u oggolaan kartaa wakiillada iibka iyo hoggaamiyeyaasha iibka inay fahmaan koorsadooda.
In ka badan 3,000 maareeyayaasha iibka Kordhi hamiga si aad uga caawiso wadista wicitaano badan, ballanso kulamo badan, iyo dabaaldeg heshiisyo badan oo xiran oo loogu talagalay kooxaha iibka fog ama xafiiska. Maaddaama hoggaamiyeyaal badan oo iibiya ay raadinayaan inay isku koobaan tirada dhufto ee ay isticmaalayaan, Hamigu wuu wada sameeyaa. Laga soo bilaabo tababbarka iibinta illaa hoggaamiyeyaasha, Damaca ayaa ka caawiya hoggaamiyeyaasha iibka inay sameeyaan go'aanno caqli badan iyo istiraatiijiyad u oggolaanaya kooxda inay soo bandhigto waxqabadyo si wanaagsan loo maareeyay oo loo baahan yahay si loo gaarsiiyo natiijooyinka.
Hamigu wuxuu ku dhexjiraa Salesforce, Slack, Dialsource, Cisco, ringDNA, Velocity, Gong, SalesLoft, Chorus, and Outreach… Kooxaha Microsoft ayaa dhawaan soo socda. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato hamiga iyo sida aad u maareynayso wakiiladda iibintaada:
Jadwal Demo Demo Maanta
Tags: hamiCiscoCRMXog -hayntaiibinta shirkadaabaalmarintaKooxaha MicrosoftwacyigelinringDNAiibinta gamificationaragtida iibkamaaraynta iibkacabirrada iibkadhiirigelinta iibkawaxqabadka iibkamaaraynta waxqabadka iibkawax soo saarka iibkawarbixinta iibkaiibka dhibcahakooxda iibkaiibinIibintadebcinxawaare
Brian Trautschold waa aasaasaha iyo COO at Hanka, Mashruuca maaraynta waxqabadka iibinta ee la mahadiyey ee loo dhisay ururada iibka ee xogta ku shaqeeya iyo millatariga sanadlaha ah La xiriir Brian bogga Twitter iyo LinkedIn oo bilow wadahadal ku saabsan qaar ka mid ah mowduucyada uu jecel yahay: Iibka, bilowga, suuqgeynta, iyo xanta ganacsiga NBA.